SUXULOOW WAA SAXAR – dhugasho
Soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa ‘ili ayaan badanaa, hareeraheeduna ayaan daranaa’. Odhaah kale ayaa u dhigan sidan “Ileey ama
itaal lahow, ama ayaan lahow, waxana ay dooratay ayaankii!” Waxa ay se ila tahay in ishu aanay wax dheeraad ah ka sidanin jidhka intiisa kale bal se “ayaan badnaanteeda” loo tiirin karo uun aragga ay iska arki karto halisaha oo markaa ay baalasha is-qabadsiiso ama (iyadoo kaashanaysa maanka) ay dhinac isaga barbariso halis ku soo fool leh. Ishu aad bey ugu nugushahay walxaha soo-galowtiga ku ah gurigeeda ama baradeeda.
Waxa ugu yar ee dhibaatayn kara waxa ka mid ah saxarka. Doorroonaanta araggu u leeyahay noolaha awgeed, dadku ma fududaystaan waxa ugu yar ee soo gaadha isha. Markiiba qofku waxa uu cid kale ka raadsadaa gacan siin. Ciddaasina si hagar la’aan ah ayay ugu fidiyaan wixii samato bixin ah. Markiiba waxa la arki karaa qofkii isha saxarku ka gaadhay oo isu dhiibay qofkii kale ee uu wax-tar biday. Indhaha ayuu u kala qabtaa, marna baalasha ayuu kala jiidaa, mar kor marna hoos eeg buu ku yidhaahdaa, isagoo indhaha ku biniininaya oo raa- dinaya meesha ay taallo walaxda soo-galowtiga ah. Haddii ay dhibtu ka timid ciid ay sidatay saxar-qaad dabayleed, waxa uu isku dayaa in uu xoog ugu
afuufo isha gudaheeda, isa- goo neef ka buuxiyay labada can, dibnahana (bushimahana) soo ururi- yay si uu u xoojiyo xawaaraha neefta – in ku filan in ay isha ban- naanka ka soo
dhigto ciid yar oo ay ilmo qoyso sida uu u kala daran yahay xanuunku, mararka qaarkood, sanka ayaa isha la ooya oo biyo ka yimaaddaan. Waxay kaloo Soomaalidu rumaysan tahay in ishu liqdo walxaha qaarkood sida cidda iyo saxarrada yaryar. Ha yeeshee, mararka qaarkood, siiba arooryada hore, waxa dacallada isha lagu arkaa xafajo ay la socdaan wax ka mid ah walxihii soo-galowtiga ahaa. Islaamaha qaarkood baa la yidhaahdaa hoodo ayay ku leeyihiin saxar bixinta iyagoo carrabka caaraddiisa ula taga isha oo ku maraanmara. Wax- ana la rumaysnaa in carrabku si dhibirsan dibedda uga soo dhigi karo isha. Farsamo kale ayaa iyana ah in maro yar la isugu laablaabo si ay caarad dhuuban u yeelato oo badiba candhuuf lagu qoyn jiray (gab aabsiga biyood awgeed) marka la helana biyo lagu qooyo, ka dibna saxarka ama ciidda lagu soo qaadi jiray. Haddii ay ishu yeelato kaar iyo garaac badan, waxa la yeeli jiray in dacasha hoose ee dhegta xigta dhinaca isha dhibaataysan lagu xidho xadhig yar, waxana la arki jiray in kaarku ka yaraado.
Waana hab-maarayneed u dhigma farsamo wax- iskula-daal (dabiib) ka jirta dalka Shiinaha oo loo yaqaanno Akubanjar (acupuncture) – oo ku salay- san turqin la abbaarsiinayo meel aan badiba ahayn meeshii ama xubintii jirranayd si bogsiin ama lad- naanshiiyo loogu helo. Arrinta ugu la-yaabka badani waxa ay tahay in suxulka loo adeegsado maaraynta saxarka, siiba marka la doonayo in ay ‘ishu saxarka liqdo’ oo maarayn kale loo waayo. Mar kan oo kale inta isha la isku qabto ayaa suxul qof kale guudka lagaga marmarin jiray. Waana ta ay Soomaalidu odhon jiray “Suxuloow waa Saxar!” iyada oo aad mooddo in lagu cabsi gelinaayo sax- arku in uu ka muquurto meesha.
QAYBTA HOGGAANKA HORUMAR- INTA KORITAANKA MASKAXDA